LinkedIn ပရိုဖိုင်းလမ်းညွှန်: LinkedIn ကျွမ်းကျင်ရန် Ultimate Visual Guide
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2021 အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 Douglas Karr
အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမငြိမ်မသက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာသည်ကူးစက်ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောပိတ်ဆို့မှုများတလျှောက်လုံးတွင်အရင်းအမြစ်များကိုသယ်ဆောင်လာသည်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းများသည်အတွေ့အကြုံရှိသောအရည်အချင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေရသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှလူအများအားသူတို့၏ LinkedIn ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများသို့ပြောင်းရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအကြံပေးခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်မှုများတွင်နက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ်ရှိသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏နောက်တိုးတက်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ ငှားရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုမြင်ကြသည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤသို့လုပ်ရန်အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
ကျနော်တို့ infographic လမ်းညွှန်များကိုထုတ်ဝေပြီးပြီ LinkedIn ပရိုဖိုင်းအပါအဝင် Linkedin ကိုယ်ရေးအချက်အလက်သိကောင်းစရာများ နှင့်တစ် ဦး အကောင်းဆုံး လူမှုရောင်းရန်အတွက် LinkedIn ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဒါပေမယ့်ဒီ အပန်းဖြေအလုပ်များမှ Ultimate Cheat Sheet networked နှင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုများအတွက်သင် LinkedIn အားအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်သေချာစွာစီစဉ်ထားသောကောင်းမွန်သောရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်အပြည့်အဝ optimized Linkedin ပရိုဖိုင်းကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အဆ 40 ပိုများပါတယ်သိခဲ့သလား
LinkedIn Profiles များကို Ultimate Guide တွင်အဆင့် ၇ ဆင့်ပါဝင်သည်
ပြီးပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းကိုအသေးစိတ်ပုံစံ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ယူပါ။ အဲဒီဓာတ်ပုံမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ကိုရိုက်ယူပြီး LinkedIn ကသင်ဖြတ်သန်းသမျှသောနယ်ပယ်အားလုံးကိုဖြည့်ပါ။ LinkedIn ဓာတ်ပုံများသည် အရေးပါသော ပထမအထင်အမြင်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။.
ပုံအရွယ်အစား - အကောင်းဆုံးသောပုံအရွယ်အစားများသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ LinkedIn မှပေးထားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကြံပြုချက်များအတွက်ကွင်းဆင်း - တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားမည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောပြသည့်အခါသူတို့ကို LinkedIn မှတစ်ဆင့်အကြံပေးပါ။ ၎င်းတို့သည်သင်ဖြည့်ထားသောအလုပ်တစ်ခုစီနှင့်ဆက်စပ်နေလိမ့်မည်။
Hidden LinkedIn ရဲ့ထူးခြားချက်များ - အဖွဲ့များကိုဆက်သွယ်ပါ၊ LinkedIn ရှိမှတ်စုများကိုယူပါ။ သင်၏ Slideshare တင်ပြချက်များကိုပြသရန်သေချာပါစေ။
LinkedIn မှာတွေ့ရှိပါ - သင်၏ URL ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ၊ အလုပ်အမည်များအတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်များကိုသုံးပါ။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။
LinkedIn နေ့စဉ်သိကောင်းစရာများ - တန်ဖိုးပေးခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များမျှဝေခြင်း၊ သင်၏ကွန်ယက်ကို ဦး ဆောင်သူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကွန်ယက်တွင်ဘဏ္stာစိုးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းကသင့်အား LinkedIn မာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေလိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ လူအများအပြား phishing အစီအစဉ်၏ပစ်မှတ်များဖြစ်လာပြီး brute force hacking ကိုပစ်မှတ်ထားလာကြသည်။ 2-factor authentication ကိုဖွင့်ပါ။ သို့မှသာလူတို့သည်သင်၏အကောင့်ကိုသိမ်းဆည်း။ မရနိုင်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်နေရာအသစ်တစ်ခုကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေပြီးသင်၏အခွင့်အရေးများကိုတိုးမြှင့်လိုပါကသင်လည်းသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပေမည် LinkedIn တို့ပရီမီယံ။ ၎င်းသည်သင့်အားအတွင်းပိုင်းရှာဖွေမှုများအတွင်းမြင်သာမှုပိုပေးသည်နှင့်သင့်အားအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့စေနိုင်သည်။
InMail မက်ဆေ့ခ်ျများ - ငှားရမ်းမန်နေဂျာများနှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုမည်သူကြည့်ပြီးပြီလဲ - လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်၏ပရိုဖိုင်ကိုမည်သူကြည့်ရှုနေသည်ကိုကြည့်ပါ။
LinkedIn သင်ယူသင်တန်းများ - သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် (သို့) အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သည့် ဦး ဆောင်သော LinkedIn Learning Courses ၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုရယူပါ။
အင်တာဗျူးအဘိတ် - သင်၏ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူအတည်ပြုထားသောအင်တာဗျူးအဖြေများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်မန်နေဂျာများအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ထင်ရှားသည်။
ယူကေရှိ Jobs ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု၊ အားကစားနှင့်လက်လီအလုပ်အကိုင်များ၏အပန်းဖြေနေရာ၏အပန်းဖြေအလုပ်မှသတင်းအချက်အလက်။
Tags: အပန်းဖြေအလုပ်များlinkedinlinkedin အကြောင်းအရာlinkedin ပရိုဖိုင်လိပ်စာပရိုဖိုင်လမ်းညွှန်လိပ်စာပရိုဖိုင်းကို optimizationလိပ်စာပရိုဖိုင်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောလိပ်စာကို
WordPress တွင်ပြတ်နေသောလင့်ခ်များကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေး၊ စောင့်ကြည့်၊
မတ်လ 23, 2016 မှာ 1: 57 AM
အဲဒါက အရှည်ဆုံးဖြစ်ရမယ်… စေ့စေ့စပ်စပ်အရှိဆုံး Infographic ကို ဆိုလိုတာပါ။ 😉
မတ်လ 23, 2016 မှာ 9: 23 AM
ဟုတ်တာပေါ့? ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အလွတ်ကျက်ခဲ့တယ်။ 🙂
ဧပြီ 1, 2016 မှာ 1: 38 AM
Douglas၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ပို့စ်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တိုးတက်မှုကို ရှာဖွေနေသော LinkedIn အသုံးပြုသူများ၏ ကောင်းမွန်သော သရုပ်ဖော်မှု မြင်ကွင်း။
ဧပြီ 1, 2016 မှာ 8: 43 pm တွင်
ဧပြီ 30, 2016 မှာ 2: 45 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်ဘလော့ဂ်သည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။